मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क | Nagarik News - Nepal Republic Media
मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क
१८ फाल्गुन २०७३ ८ मिनेट पाठ
काठमाडौं- प्रत्यारोपण खर्च नभएकै कारण वर्षौंदेखि डायलसिसले जीवन धानिरहेका मिर्गौला रोगीलाई खुसीको खबर! स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिर्गौला प्रत्यारोपण पूर्ण निःशुल्क गर्ने निर्णय लिएको छ । यसअघि डायलसिस निःशुल्क गरे पनि प्रत्यारोपणमा चर्को शुल्क लाग्ने हुँदा विपन्न रोगीले लामो समयसम्म डायलसिसको भरमा जीवन धान्नुपर्ने बाध्यता थियो।
‘मन्त्रालयबाट निर्णय भइसकेको छ, अन्य आवश्यक तयारी गरेर यसको औपचारिक थालनी हुन्छ’, थापाले नागरिकसँग भने । सरकारको यो सुविधा लिन प्रत्यारोपण भने नेपालभित्रै गरेको हुनुपर्छ ।
मिर्गौला जीवित र मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट समेत निकालेर प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । नेपालमा यसअघि बाबुतर्फ र निकटका आफन्तले मात्रै अंग दिनसक्ने प्रावधान परिमार्जन गरेर सम्पूर्ण नाताले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आफन्त तयार भए प्राविधिक रुपमा मृतकको अंग निकालेर प्रत्यरोपणमा सक्षम रहेको मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द श्रेष्ठले बताए । ‘डायलसिस निःशुल्क दिए पनि उसलाई आवश्यक पर्ने अन्य औषधि समेत धान्न धौधौ हुन्छ,’ निर्देशक डा. श्रेष्ठले भने, ‘प्रत्यारोपण गरेको मान्छेले काम गरेरै भए पनि प्रत्यारोपणपछिको औषधि धान्न सक्छ ।’
मन्त्रालयले प्रत्यारोपणपछि आवश्यक औषधिको समेत मूल्य उल्लेख्य रुपमा कम गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले अघिल्लो वैशाखदेखि सातामा दुईपटक डायलसिस निःशुल्क दिन थालेको थियो । मन्त्री थापाले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गराएका थिए । सम्पूर्ण डायलसिस निःशुल्क गर्दा पनि बिरामी पक्ष र विशेषज्ञसमेतले प्रत्यारोपण र त्यसपछिको औषधिमा सहुलियत हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
पछिल्लोपटक मन्त्रालयकै पहलमा प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेर सम्पूर्ण आफन्तले मिर्गौला दिन मिल्ने व्यवस्थाका साथै मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भएका बाट समेत सहमतिमा महŒवपूर्ण अंग झिकेर प्रत्यारोपण गर्ने कानुन पास भएको थियो ।
नेपालमा सन् २००८ मार्च ८ गतेबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएको थियो। यसबीचमा अस्पतालले मात्रै ४२५ जनामा सफल प्रत्यारोपण गरिसकेको छ । एक वर्षपछि सुरु भएको वीरमा २ सय, मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा २ सय ५६ जनामा प्रत्यारोपण भइसकेको छ । निजी क्षेत्रका समेत ग्रान्डी, भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेज र निदान अस्पतालले प्रत्यारोपणको अनुमति पाएका छन्। निजीमा नगण्य मात्रामा प्रत्यारोपण भइरहेको छ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७३ ०७:११ बुधबार